Ziziphi izinto ze-SEO eziqinisekisiwe ngazo zonke iinjongo zee-backlink?
Namhla, i-giant search giant iyaziwa ukuba isebenze nge-algorithm epheleleyo, exhomekeke kwimibandela engamakhulu amabini. Phakathi kwezinye, i-injini ye-Google yophando ihlola i-backlink nganye yeprofayili efayili isebenzisa iimpawu eziliqela ezihlukeneyo ze-SEO. Ngaphambi kokuba kukubonise oko kuthethwa ngqalelo yiGoogle ukuba "ukuqonda" ixabiso langempela le-backlink kwiWebhu, makhe ndiqale ngeetem.
Yintoni eyenza i-backlink?
Okokuqala nokuphambili, yintoni i-backlink ngcaciso? NjengeGoogle ngokwayo, yonke injini enkulu yokukhangela ibonisa i-backlink njengezixhumanisi ezingenayo okanye ezingenayo ukusuka kuyo nayiphi na imithombo ye-intanethi ye-third party, ubuyele kwiwebhusayithi yakho. Kwaye simelane nathi - ekuqaleni kwalo nyaka kwakukho umyalezo wokuqala ochanekileyo owake wachazwa ngamagosa e-Google malunga neprofayile yekhonkco engenakuninzi phakathi kwezinto ezintathu eziphambili. Yingakho injini yokukhangela yeGoogle inikeza i-backlink ebaluleke kakhulu ngoku. Ukukubeka ngokulula, ngaba "iivoti" zokuzithemba, eziqinisekisa zonke izithenjwa zokuthembeka phakathi kwabasebenzisi kwaye ziqinisekise umgangatho wazo wonke umxholo wephepha kuwo wonke.
Into into yokuba "igosa elifanelekileyo" lewebhu kwi-scale lithetha zonke iphepha lizithemba ngabasebenzisi abaphilileyo, iingcali zoshishino (okanye iimpawu zeemakethe), kwakunye ezinye iiwebhusayithi ezigunyazisiweyo okanye ii-blogs, kunye neenjini ezinkulu zophando emva koko. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba nayiphi na umthombo we-intanethi enegunya eliphezulu akuthethi ukuba ungomnye wabamemezeli abaninzi abavakatyeweyo phantse behlabathi. Emva kwakho konke, ukuba umntu uqhuba iblogi ye-niche okanye iwebhusayithi enezinto ezikhethekileyo, ezixabisekileyo nezifanelekileyo - umthombo onjalo unokuthi uthatyathwe kakhulu, mhlawumbi ungcono kuneyona. Ngaloo ndlela, yonke injini yokusesha iqinisekisa i-backlink ukunquma ukuba i-website okanye iblogi iyafaneleka ukubonisa phakathi kweziphumo eziphezulu kwi-SERPs.
Iinjongo zeKhangelo ze-Google ziqinisekisa ii-Backlink nge:
ukudibanisa iiprofayili ezahlukeneyo (i. e. , isethi yee-backlinks ezahlukeneyo, ngokungalingani kwekhasi le-PageRank, elivela kwiindawo ezahlukeneyo kwiwebhu kunokwenzeka);
i-pagerank (i-PR), igunya lesigunyaziso (DA), kunye negunya lephepha (PA) yomthombo ngamnye we-intanethi udibanisa kumaphepha akho ewebhu (. e. , kungcono ukuba ne-backlink ezimbalwa kunye negunya eliphezulu kunye nethemba, kunokuba kubekho ipakethe enkulu ephezulu);
i-backlinks ukusuka kwimimandla edala ihlala ibonakala ibaluleke ngakumbi kunezo ezivela kwimithombo esandul
iiwebhusayithi ezichaphazelekayo okanye iiblogi ziya kunika i-backlink evamile kunye nexabiso elikhulu kakhulu xa lifaniswa neenqwelana ezingekho nantoni na ezingekhoyo ezivela kwimithombo engabikho;
isicelo se-Hat-Black SEO (umzekelo, ifama yeekhonkco, izixhumanisi zogaxekile, iphepha lokungena, iivili ezinxibelelwano, ii-anchors ezifihliweyo, njl. ) unokufumana amandla amakhulu okuba nefuthe elibi kakhulu kwii-rankings zangoku zewebhu;
izixhumanisi ezingqinelanayo zomxholo (i. e. , i-backlinks efunyenweyo kumxholo womzimba webhuculo lwekhasi lewebhu) linamandla kakhulu, kunokuba nayiphi na enye indawo yomhlaba (ngaphandle koko, unyawo) ziboniswe kwiijethigethi ezihlukeneyo, iifowuni, okanye ezinye izicwangciso zephepha Source .